Banyere Anyị - Anke mbukota Company Limited
Guzosie ike na 2009, ANKE mbukota Co; Ltd bụ onye ndu ndị isi na ụlọ ọrụ mbukota Eliquid & CBD. Ekpuchi ebe nke 22,000 square mita, na oge a na mmepụta omumuihe, ọgụgụ isi nchekwa omumuihe,
Ebe R & D, ebe oru na ihe ndi ozo. Anyị nwere 15 mmepụta ahịrị nke karama plastic, 6 ahịrị nke karama na akwụkwọ obibi akwụkwọ igbe. Kwa afọ na-emepụta ihe karịrị 230 mln PC gụnyere
plastic , karama n'elu ite, ite CBD, karama pipette, iko mmiri na ihe ndị ọzọ.
Site na mbọ niile nke otu anyị, ụlọ ọrụ ANKE France hiwere na Lille. Ọ ka mma ugbu a ịnye !
ANKE nabata kọntaktị gị!
Na ozi na chọrọ anyị na-enweta site na ndị ahịa, anyị Sales Department, Research Department, Production Department, Quality Control Department, mbukota & Mbupu Department na Mgbe ahịa Department ọrụ ọnụ na-enye zuru okè karama.
Sales Department-Akwado ngwaahịa na ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi. Anyị ahịa otu bụ ọkachamara na ngwaahịa na nkwurịta okwu. Anyị ga-a nnọọ obi ụtọ nkwurịta okwu ma na-egosi nkọwa mfe.
Production Department --- Product kpọmkwem ngwaahịa gị mkpa. All nke anyị na-arụ ọrụ na-enweta na-na-azụ kwa ọnwa. The igwe ga-enyocha ma na-arụzi ihe mgbe mgbe. Site na nke a ụzọ, elu àgwà karama ike-emepụta.
Quality Control Department --- Jide n'aka na onye ọ bụla gị ngwaahịa zuru okè. Onye ọ bụla ụdị karama nwere ihe pụrụ iche àgwà akara usoro. Onye ọ bụla ngwaahịa nwere ike nwalere dịkarịa ala, 3 ugboro tupu mbupu. Ya mere onye ọ bụla karama ga-ziri ezi na nke zuru okè.
Mbukota & Mbupu Department --- ekwe nkwa na ị ga-enweta ezi karama na oge. Ngwaahịa ga-juru n'ọnụ n'ime oké katọn na-echebe. Anyị ga-ndokwa mbupu tupu ka eme n'aka, mgbe ngwaahịa njikere, anyị nwere ike izipu ha.
Arụ ọrụ na ANKE mbukota, ị ga-esi zuru okè ngwaahịa nakwa dị ka ọrụ ozi. Nye anyị abụọ a ohere, ị ga-enweta a pụrụ ịdabere na onye òtù ọlụlụ.